> Household wear>FORM CABINET
10 drawers form cabinet for A4 or B4 sized paper with circle handle style. A4,B4 စာရွက်စာတမ်းများအပြင် ကဒ်များပါထည့်နိုင်သည့် စက်ဝိုင်းသဏ္ဍန်လက်ကိုင်ပါ အံဆွဲ (၁၀)ခုပါသော အံဆွဲကြီး။ Size: W38*D45.7*H94 cm. အတိုင်းအတာ – အလျား ၃၈၊ အနံ ၄၅.၇၊ အမြင့် ၉၄ စင်တီမီတာ Central lock key system / suitable for keep many kinds of paper form ဗဟိုလုံခြုံရေးသော့စနစ်ပါဝင်သောကြောင့် အမျိုးမျိုးသော အရေးကြီးစာရွက်စာတမ်းများထည့်သိမ်းရန် သင့်တော်သည်။